Reputation dia aloky ny aizim-panjakana | Martech Zone
Zoma, Febroary 13, 2009 Sabotsy, Janoary 8, 2011 Douglas Karr
Ny vaovao dia feno tantara tsy mampino momba ny zanak'olombelona tato ho ato:
Alex Rodriguez manaiky amin'ny steroid (hafahafa nesorina tamin'ny pejin'ny vaovao AROD an'ny MLB.com)
Michael phelps vilany mifoka sigara. Very tamina fifanarahana fifanekena goavana tamin'i Kellogg's izy taorian'izay.
Na i Barack Obama aza dia nanana herinandro henjana roa, manandrana mitady mpikambana ao amin'ny kabinetra ary manosika fonosana mandrisika manana laza malaza milentika io.
Misy ny fitoviana. Ny tsirairay tamin'ireo olona ireo dia teo an-tampon'izao tontolo izao. Izy ireo no manam-pahefana faratampony - tsy nisy olona afaka nanakaiky azy ireo akory.
Ny fahefana dia iray amin'ireo zavatra azon'ny olona iray tsy misy laza. Ireo telo lahy ireo dia olon-tsotra talohan'ny nahazoany fahefana tsy dia mahazatra. Nahatratra tanjona lavitra lavitra noho izay toa azon'ny olona maty toa ahy sy ianao izy ireo.
Tao anatin'ny herintaona dia nifindra avy tamin'ny senatera zandriny ny filoha Obama mba hahatratra ny toerana avo indrindra (azo lazaina) eto amin'izao tontolo izao. Tao anatin'ny 10 taona, AROD dia nitombo ho mpilalao baseball matihanina tsara indrindra sy be karama indrindra. Tao anatin'ny 7 taona, Phelps no nanjary Olimpiana voaravaka haingo indrindra teo amin'ny tantara, efa tsy fantatra talohan'ny Lalao Olaimpika 2 farany.
Ny laza dia mitovy amin'ny aloka. Eo foana ary miaraka aminao foana. Raha mbola miposaka eo amin'ny tavanao ny masoandro, ao aorianao io, ary angamba hadino. Raha olona normal ianao dia tsy misy olona mijery ny alokalonao. Na izany aza, rehefa mijoro eo ambonin'ny vahoaka ianao dia aloka kely fotsiny.
Eto amin'ity tontolo ity izay ny zavatra ataontsika rehetra dia voarakitra sy azon'ny rehetra alaina, dia tsy maintsy zatra ny olombelona olombelona isika. Tsy misy lavorary isika, ary tsy hanana fahalavorariana.
Rehefa miezaka manangana fahefana ianao, aza hadino fotsiny fa manana laza tsara hotazomina ianao.
13 Feb 2009 tamin'ny 10:08 maraina
“Raha mbola miposaka eo amin'ny tavanao ny masoandro, ao aorianao io, ary angamba hadino… rehefa mijoro eo ambonin'ny vahoaka ianao, dia aloka kely fotsiny.”
Eny… ary amin'ny alàlan'ny Internet dia hanana mpihaino olona 3 Miliara araka ny hafainganam-pandehan'ny hazavana io aloka io. Sarotra kokoa ny manao lesoka ary manarona azy io ankehitriny. Avy hatrany ny fanaparitahana vaovao.
13 Mey 2009 tamin'ny 5:28 hariva
“Ny toetra amam-panahy dia toy ny hazo ary ny laza toa ny alokalony. Ny aloka no eritreretintsika momba azy; ny hazo no tena zavatra. ” Abraham Lincoln
Miaraka amin'ny eritreritrao ianao! 😉
13 Mey 2009 tamin'ny 6:13 hariva
Tena nieritreritra ny haka boky momba an'i Lincoln aho. Ny sasany amin'ireo seho History Channel tamin'ny taraiky dia nampiraikitra ahy. Misaotra betsaka nizara an'ity! Tsy mendrika an'izany karazana fiderana izany aho.
14 Mey 2009 tamin'ny 11:29 hariva
Samy safidy adala i Michael sy i ARod, ny filoha, miaraka amin'ny safidy maro tokony hataony, dia tsy maintsy manao hadisoana vitsivitsy.